Gbakọọ larịị snow: ihe gburugburu na akụkụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Gbakọọ snow larịị
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa mgbe a bịara n'ịkọwa amụma ihu igwe bụ ịmara ịdị elu nke snow ga-apụta. A maara nke a dị ka gbakọọ ọkwa snow. Ọdịdị nke mmiri mmiri siri ike n'oge mmiri ozuzo na-emetụta ọ bụghị naanị mmemme akụ na ụba na gburugburu ndị na-adịghị ike, kamakwa ụdị ọrụ ọ bụla kwa ụbọchị.
N’isiokwu a anyị ga - akuziri gị etu esi gbakọọ ọkwa snow na etu o si dị mkpa.
1 Gbakọọ snow larịị
2 Altitude na okpomọkụ
3 Okpomọkụ iji gbakọọ ọkwa snow
4 Iru mmiri, ebe igirigi na ugwu
Mgbe oke mmiri malitere n'ụdị siri ike, ọ na-emetụta ọtụtụ ọrụ mmadụ. E nwere ọtụtụ ebe na-adịghị ike dịka bụ okporo ụzọ na ikuku, ihe ndị a na-eme n'èzí na njem ugwu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla kwa ụbọchị na ndụ na obodo ukwu nwere ike ịmetụta snow. Ọdịiche dị n’ogo snow nke narị mita abụọ nwere ike ịpụta ọdịiche dị n’etiti ụbọchị mmiri ozuzo na ọdịda kpamkpam nke obodo n’ihi snow. Kwesiri iji obodo ndị snow na-agakarị mgbe ị na-akwadebe maka ihe a na ihe ọghọm ọ gụnyere.
Anyị maara na ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ dị mkpa mgbe ọ bịara n'ụdị ọdịda dị iche iche. Ọ dịkarịrị ka snow na-aputa ihe mgbe ikuku ikuku nwere okpomọkụ dị ntakịrị karịa ogo 0 ma ọ bụ nso. Buru n'uche na ụdị okpomọkụ a ga-adịrịrị n'elu ebe anyị nọ. Mgbe anyị lere anya na ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku ikuku, anyị na-enweta atụmatụ nke, n'ọtụtụ ọnọdụ, nwere ike ọ gaghị ezu. Ọ na-adị ngwa ngwa mgbe anyị matara nke ahụ enwere ihe ndị ọzọ nwere ike ibute njehie mgbe ị na-agbakọ larịị snow na nsogbu bia. Nsogbu sitere na ime amụma ihu igwe.
Altitude na okpomọkụ
Altitude na okpomọkụ bụ ubi mbụ a na-echekwa iji gbakọọ ọkwa snow. Ọ bụ otu n'ime ihe mbụ na-enye anyị ntụzịaka banyere ogo ogo snow nwere ike ịdị. Ihe omimi di 0 bu uzo nke edobere otutu onodu a. Nke ahụ bụ, ịdị elu site na nke okpomọkụ dị njọ n'okpuru ọnọdụ nkịtị. Ọtụtụ mgbe, Ntughari nke oku adighi eme na ihe di elu, mana o nwekwara ike ime. Snow n'ozuzu ya na-amalite agbaze n'okpuru ọkwa a. Ọ bụ na mbụ snowflakes anyị hụrụ bụ a narị ole na ole narị n'okpuru isotherm. N’ebe ndị a, anyị nwere okpomọkụ nwere ụkpụrụ dịtụ mma karịa ogo 0.
Ihe ọzọ a na-ahụkarị bụ ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide nke 850 hPa. Ọ bụ ihe gbasara a ikuku mgbali elu ikuku nke a na-ahụkarị ya gburugburu mita 1450 nke elu. Uru nke iji usoro nrụtụ aka a na-ahụ ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku ikuku bụ na ọ na-anọchi anya ọnọdụ okpomọkụ nke dị na ọkwa dị ala. Uru ọzọ nke ụdị usoro nrụtụ aka a bụ na e kewapụrụ ya nke ọma na ala ka ọdịiche dị na mbara ala, radieshon nke anyanwụ na usoro nke ehihie na abalị adịghị egbochi ọnọdụ okpomọkụ. N'ihi usoro ndị a ọ ga-ekwe omume ịgbakọ ogo snow dị mfe karị.
Okpomọkụ iji gbakọọ ọkwa snow
Obi abụọ adịghị ya, okpomọkụ bụ mgbanwe kachasị mkpa gburugburu ebe obibi maka ịgbakọ ogo snow. Nyochaa naanị okpomọkụ na ọkwa kachasị dị ala, enwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na anyị anọgide na-agbakọ ọkwa snow n'ụzọ ziri ezi. Maka otu okpomọkụ ahụ na ọkwa dị ala, snow snow nwere ike ịdị iche. Ihe kpatara mgbanwe a bụ n'ihi ụkpụrụ okpomọkụ dị na ọkwa dị elu. Ihe kachasị dị mma bụ na eserese niile na tebụl nduzi iji gbakọọ ọkwa snow na-agunyekarị okpomọkụ na 500 hPa nke nrụgide nke ikuku. N'ime ụdị nrụgide a, anyị hụrụ onwe anyị n'ogologo ihe dị ka 5500 mita karịa elu oke osimiri.
Ọ bụrụ na anyị ahụ ikuku dị jụụ na etiti na elu, enwere ịrị elu na ikuku nke nwere ike ibute oyi. Ọ bụrụ na anyị ahụ mmiri ozuzo ugboro ugboro na mpaghara ndị a, a ga-enwe oke ndapụta na ọkwa snow. Ndida a na mberede na-apụtakarị narị narị mita ole na ole karịa ka a tụrụ anya ya. Ikpe kachasị njọ a na-ahụkarị bụ mgbe ikuku dị jụụ ma kwụsie ike n'ogo ma nwee ike ibute ikuku miri emi na ebili mmiri. Ọ bụ n'ọnọdụ ndị a dị oke egwu mgbe ọkwa snow nwere ike ịdaba karịa mita 500. N’ebe a, ọ na - egbochi mgbochi mmiri ọ ga - eduga na nnukwu mmiri ozuzo na-atụghị anya ya.
Ọrịa ndị a na-aputakarị na obere oge n’oge udu mmiri na ebe anaghị adaba snow ugboro ugboro, mana ọ na-eme snow kwa afọ. Nrụgide nke 850 na 500 hPa abaghị uru ọ bụla. N'ebe ndị nwere nrụgide dị elu na nnukwu geopotentials anyị nwere ike ịhụ snow n'elu. N'aka nke ọzọ, enwere ike ịchọta ha na ịda mba bụ na ọ dị oke oyi ma dị omimi ebe ọ na-apụta na enyemaka dị iche iche nke troposphere ndị nwere oke ala. Ọ bụ ebe a ka anyị nwere ike ịchọta ụkpụrụ nrụgide nke 850 hPa na naanị mita 1000 nke elu.
Ka snow dịrị na ebe ndị a ga-enwerịrị ọnọdụ okpomọkụ gburugburu ebe obibi nke ogo 0 na nrụgide nke ikuku a yana dịka ihe dị mkpa nke 1000 mita.
Iru mmiri, ebe igirigi na ugwu
Ihe atọ a bụ ihe ga-eme ka anyị dị mma mgbe anyị na-agbakọ ọkwa snow. Iru mmiri dị mma. Na gburugburu nwere oke iru mmiri, snowflakes gbazee ngwa ngwa na nani 200 mita n'okpuru 0 ogo isotherm. Ya mere, na mpaghara ndị a, mmiri ozuzo na-abụkarị mmiri ozuzo. Mgbe oyi akwa ikuku na-apụta n’ebe dịdebere ụwa, snowflakes nwere ike ịchekwa usoro ha nke na-agaghị agbaze ọ bụla ruo ogologo oge. Ọ bụrụ na iru mmiri dị oke ala ma ọnọdụ okpomọkụ dị mma, ihe nkiri mmiri ga-amalite n'ezie ịmalite n'elu snowflakes. Ọ bụrụ na iru mmiri dị oke ala, a na-amalite ịme mmiri ahụ, na-enweta ume site na ahụ ya na ikuku dị gburugburu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkụ ndị a na-aghaghị iburu n'uche iji gbakọọ ọkwa snow.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gbakọọ snow larịị